Ukuxhumana Kwangempela Kwesikhathi: Iyini iWebRTC? | Martech Zone
Ukuxhumana Kwangempela Kwesikhathi: Iyini iWebRTC?
NgoLwesine, Septhemba 5, 2019 NgoMsombuluko, Okthoba 5, 2020 USienna Amelia
Ukuxhumana kwesikhathi sangempela kuyashintsha ukuthi izinkampani zisebenzisa kanjani ubukhona bazo bewebhu ukuze zisebenzisane kahle namathemba namakhasimende.
I-Web Real-Time Communication (WebRTC) iqoqo lamaphrothokholi wezokuxhumana nama-API aqale akhiwa i-Google anika amandla ukuxhumana kwezwi nezikhathi zesikhathi sangempela ekuxhumaneni kontanga. I-WebRTC ivumela iziphequluli zewebhu ukuthi zicele imininingwane yesikhathi sangempela kusuka kwiziphequluli zabanye abasebenzisi, inika amandla ukuxhumana kwontanga nesikhathi sangempela nokuxhumana kweqembu kufaka phakathi izwi, ividiyo, ingxoxo, ukudluliswa kwefayela, nokwabelana kwesikrini.
I-Twilio Iyini iWebRTC?
I-WebRTC ikuyo yonke indawo.
Imakethe yomhlaba wonke yeWebRTC yayingu- $ 1.669 billion USD ngo-2018 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 21.023 billion USD emhlabeni jikelele ngo-2025.
Ucwaningo lweMakethe yeZiyoni
Eminyakeni edlule, iWebRTC yaqala njengomhlinzeki wephrothokholi yeVoIP ebhekise kwiziphequluli zewebhu. Namuhla, asikho isiphequluli esisakaza umsindo / ividiyo ngaphandle kokuqaliswa kweWebRTC. Ngenkathi kukhona abanye abathengisi abakholelwa ukuthi iWebRTC yehlulekile ukufeza okulindelwe, mhlawumbe abathengisi abahlulekile ukusebenzisa iWebRTC ukuthola ulwazi lomsebenzisi oluphakeme.
I-WebRTC imayelana nokuthuthukisa izingxoxo zesikhathi sangempela ngesiphequluli sewebhu. Muva nje, i-Google iveze ukuthi i-Chrome iphethe ngaphezu kwe-1.5 billion yama-audio / video yamasonto onke ngemizuzu. Lokho cishe Imizuzu eyizigidi ezingama-214 ngosuku. Futhi lokho kuku-Chrome nje! Nakhu ukubukeka okuningiliziwe kwamakhono atholakala kusetshenziswa iWebRTC.
Yini Ukuxhumana Kwangempela Kwesikhathi Kuyatholakala ngeWebRTC?
Ukwabelana Ngesikrini - Thola okuningi ngokubambisana nabanye abasebenzisi ngokushesha. Uhlelo lokusebenza lwengxoxo yevidiyo ye-WebRTC 'ye-Android / iOS lwenza ukwabelana kwesikrini ukude nenye idivayisi noma umsebenzisi onokufinyelela okufanele. Ngokusayinwa kweWebRTC, ukusebenzisana okukude kwesimanjemanje kuyasungulwa ngabanikezeli besikhulumi bezokuxhumana abazihola okungukuthi Skype& Isibuko. Isici sokwabelana ngesikrini senza ukuba konke ukusebenzisana kwebhizinisi kube sesimweni esilandelayo lapho umhlangano osuselwa emhlanganweni uyimisebenzi yawo eyisisekelo. Kusukela ezingxoxweni kuya ekwethulweni, ama-webinars ukuya emihlanganweni, ukwabelana ngesikrini bekungumnyombo.
Ingqungquthela yevidiyo yabasebenzisi abaningi - Ingqungquthela yevidiyo ehlonishwayo yabasebenzisi abaningi idinga ukwanda okuningi ukusingatha amathani wabasebenzisi ngasikhathi sinye, kulapho ingxoxo yewebhu yeWebRTC ingena khona. Iseva yokusayina yeWebRTC ivumela ukwenza amakholi wevidiyo wesikhathi sangempela futhi abushelelezi emhlabeni jikelele. Ividiyo yeWebRTC kanye nekholi yezwi kudinga inani elincane lokusakazwa kwemidiya ukuxhuma bonke ababambiqhaza kukholi yevidiyo yamaqembu amaningi. Uhlelo lokusebenza lwekholi yevidiyo yeWebRTC lukala ukuxhumeka kwamaqembu amaningi ngama-MCUs (amayunithi wokulawula we-Multipoint) nama-SFUs (amayunithi wokudlulisela phambili wokukhetha).
Ukusebenzisana kalula - Ngalezo zinsuku lapho ujwayele ukungena ngemvume kwi-akhawunti, landa ipulatifomu bese ufaka amapulatifomu amaningana ukuze uxhumane nomunye umsebenzisi ukwenza ingxoxo. Ngeseva yengxoxo yezwi neyevidiyo yeWebRTC, azisekho izinqubo zendabuko. Ingxoxo yombhalo yeWebRTC yenza kube lula futhi kube lula ukuzwa ukusebenzisana ngokukhululekile. Ukusebenzisana kwesikhathi sangempela kwenziwa kwaba lula kumapulatifomu asungulwe ngeziphequluli ezisekelwa yiWebRTC.
Ukwabelana ngefayela - Ukudluliswa kwedatha enkulu bekulokhu kuyisenzo esinzima futhi esinzima lapho lokhu kuholela abasebenzisi ukuthi bangene kwezinye izinhlelo zokusebenza ezinjenge-imeyili noma idrayivu. Inqubo yokudlulisa idatha ayilula kangako, idle isikhathi esiningi, umzamo nedatha. Ngeseva yokusayina yeWebRTC, inciphisa inqubo ngokuvumela ukuyithumela ngqo kuwebhusayithi eshumekwe ne- ikholi yevidiyo i-API. Futhi ngokuqhubekayo, i-WebRTC ikuvumela ukuletha amafayela nge-latency ephansi kakhulu noma ngabe yi-bandwidth. Ngaphezulu kwayo, iWebRTC idlulisa imininingwane ngaphansi kophahla olulodwa oluphephile.
Ukuxhumana kwevidiyo nokuxhumana ngezwi okuphephe kakhulu - I-WebRTC Signaling WebSocket inikezela nge-RTP protocol enamandla (i-SRTP) ebethela yonke ingxoxo yezwi yeqembu leWebRTC edluliswa ku-Android, iOS nakuzinhlelo zokusebenza zewebhu. Futhi, kukhiqiza ukuqinisekiswa kokuxhumana nge-Wifi ukuvikela ucingo ekufinyeleleni okungafuneki nasekurekhodweni kwezingcingo.
Izinsizakalo zesikhathi sangempela Zokuxhumana Okubukhoma - I-WebRTC inamandla okuhlanganisa nanoma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuzwa ingxoxo bukhoma kuyo yonke imikhakha. Ingqalasizinda yeWebRTC nengxoxo yevidiyo ye-SDK idala indlela eqondile yokwenza izingxoxo ezibukhoma noma yini embonini, kusuka ezitolo, ezokuthengisa, ezempilo, ezokuxhaswa kwamakhasimende, inikezela ngezinsizakalo zokuxhumana zesikhathi sangempela.
Ukubambezeleka okuphansi kwenethiwekhi - I-Video Call API ngokuhlanganiswa kweWebRTC kunika amandla ukwabelana ngemininingwane ngqo kudivayisi noma uhlelo lokusebenza ngaphandle kokungena ochungechungeni lwamaseva. Ukufinyelela kwe-inter-browser kwenza lula ukugeleza kwedatha nezinzuzo zokudluliswa kunethiwekhi yokubambezeleka ephansi. I-WebRTC inika amandla uhlelo lokusebenza lwengxoxo ukugeleza okukhulu kwemilayezo namafayela kolunye uhlelo lokusebenza kungakhathalekile ukuthi umkhawulokudonsa onawo iwebhusayithi.
Ucingo lwevidiyo yeWebRTC kusetshenziswa i-Node.js
Hlanganisa i-WebRTC Usebenzisa i-MirrorFly
Ufuna ukuqala namhlanje? Bheka i-Real-Time kaMirrorFly I-Chat API. Nge-Chat API yabo, ungakha izinhlelo zokusebenza zemiyalezo ehlukahlukene usebenzisa izici ezahlukahlukene nokusebenza. Banikela nge-API yesikhathi sangempela yezinhlelo zokusebenza zewebhu kanye ne-SDK yezinhlelo zokusebenza zeselula ze-Android ne-iOS.
Tags: Google +isikhathi sangempelartcukwaba isikrinisdkinkomfa yevidiyowebrtc
USienna ungumfundi onenkani, umbhali onentshisekelo, umlingisi we-movie, ukuzulazula komuntu ngamunye nokuningi. Ngiyakuthanda ukubhala ngobuchwepheshe nokuthi bungena kanjani ezimpilweni zakho zansuku zonke.
Ungazikhetha Kanjani Iziteshi Ezinhle Zamasu Wakho Wokusekela Amakhasimende
Okungenzeka: Ipulatifomu Lokumaketha Lokukhula Kwesiteshi Esiphambano